Wax ka baro luqadda sirta ah ee ay ku wada sheekeystaan haweenka | Somalia News
Wax ka baro luqadda sirta ah ee ay ku wada sheekeystaan haweenka
Xigashada Sawirka, XINHUA / ALAMY
Dalka Shiinaha waxaa ka jira luqadda Nüshu oo ah mid sir ah oo u gaar ah haweenka, waxaa markii ugu horresyay laga soo tebiyay gobolka koonfur bari ku yaalla ee Hunan ee dalka Shiinaha, waa dhul buuraley ah oo ay maraan webiyo.
Luqaddan ayaa ah midd la ogyahay guud ahaan dunida oo ay haweenka dalkaas ku wada sheekeystaan. Nüshu waxaa la isugu gudbiyaa qaab qoraal ah.
Luqaddan Nüshu oo u gaar ah haweenka Shiinaha waxay soo ifbaxday qarnigii 19-aad, waxaana looga hadli jiray degmada Jiangyong ee ka tirsan gobolka Hunan, waxaana ku hadli jiray haweenka ka tirsan qowmiyadaha kala ah Han, Yao iyo Miao.
Khuburrada qaar waxay rumeysan yihiin in luqadda sirta ah ay haweenka ku sheekeysan jireen xilligii maamulkii Song ee ka jiray Shiinaha sanadihii (960-1279) ama xiligii maamulkii Shang oo haatan laga joogo in ka badan 3,000 sano. hooyoyinka beeraleyda ee ku nool halkaas ayaa gabdhahooda iyo haweenka kale sii bari jiray xilliggaas oo haweenka Shiinaha loo diiday inay helaan fursad waxbarasho.
Inta badan haweenka xilligaas waxay ahaayeen dadka aan aqoon laheyn, waxay inta badan maskaxada gelin jireen qaabka ay u qoran tahay luqadda, luqadda Nüshu waxay noqotay astaan dhaqan u ah haweenka.
Muddo kumanaan sano ah kaddib luqadda waxaa dunida laga ogaaday sanadihii siddeetamaadkii.
Sida ay sheegeyso Xin Hu oo ku nool magaalada Puwei, in luqadda Nüshu si weyn looga hadli jiray ilaa afar iyo 18 tuulo oo ku yaalla magaalada Puwei ee gobolka Hunan.
Khubarrada daraasadda ka sameyneysay luqaddan ayaa soo arkay saddex qof oo si weyn u yaqaano habka loo qoro Nüshu sanadihii siddeetamaadkii, magaalada Puwei ayaa u udub dhexaad u noqotay halka laga sameynayay daraasadda.
Xigashada Sawirka, XIN HU
Sannadkii 2006-dii, qaab qoraaleedka luqaddan waxay dowladda Shiinaha ku dartay liiska waxyaabaha taariikhiga ah ee dhaxalgalka ah, sanad kaddib waxaa matxaf laga hirgeliyay jasiiradda Puwei.
Xin waxay kamid aheyd 7 qof oo turjumayay luqaddan gaar ahaan qoraalka, barashada iyo sida loogu heeso.
Waa luqad ka kooban afar lahjadood oo maxalli ah oo looga hadlo gobolka Jiangyong, xaraf kasta wuxuu ka dhigan yahay astaan gaar ah, waxaana lagu qoraa qalin laga sameeyay geed iyo qad.
Nüshu waxay gaar u tahay haweenka ay dhibaatada la soo deristay si ay ula shekeystaan asxaabtooda.
Nüshu waa luqad ay ku wada xiriiraan haweenka aanan fursad u helin inay akhriyaan ama qoraan luqadda Shiinaha.
Xigashada Sawirka, LINGQI XIE / GETTY IMAGES
Waxaan horraan la rumeysanaa inay tahay qoraal looga soo horjeedo ragga, sida ku xusan taariikhda. Haweenka Shiinaha looma ogoleyn inay si cad uga hadlaan dhibaatooyinka heysta oo murugada ku reebay, waxayna luqaddan ku cabiraan dareenkooda xilliyada ay dhibaatooyinka lasoo dersaan.
Waxayna u horseeday in haweenka ay xoojiyaan xiriirkooda si ay uga guuleystaan ragga.
Sannadkii 2000, magaalada Puwei waxaa laga furay iskuul lagu barto luqadda Nüshu. Xin Hu waxay hooyadeed iyo walaasheed u raacday iskuulkaas si ay u barato luqaddaas.
Haatan waxay ardeyda bartaa luqadda Nüshu, waxayna hagta dadka booqashada ku tegaya matxafka, waxay noqotay dadka garwadeenka ka ah baahinta luqadda, waxay olole ka bilowday guud ahaan qaaradda Aasiya iyo Yurub.
“Dadka sida dhaxalgalka ah ku bartay luqaddan waxay ka barteen ayeyo-yaashood, sida ay Nushu inoo bartay He Yanxin, oo hadda 80 sano jir ah”.
“Dadka iyada lamid ah waxay u maleynayaan in dhaqanka uu yahay mid naadir ah oo la doonayo in wax laga barto si ay u fahmaan”.
Xigashada Sawirka, CPA MEDIAT PTE LTD / ALAMY
Arrimaha guurka waxay ka mid ahaayeen waxyaabihii horseeday in luqaddan ay soo ifbaxdo. Gabadha marka la guursado waxay tegi guriga seygeeda cusub, waxay dareemeysaa cidlo, marka waxay adeegsanayaan Nushu si ay ugu cabirto dareenkeeda iyo hilowgii ay u qabtay dadkii ay saaxibada ahaayeen iyo ehelkeeda.
Sannadka kasta waxaa tababar ku saabsan barashada luqadda lagu bixiyaa matxafka ku yaalla degmada Puwei, dadka yaqaana waxay faafaahin ka bixiyaan taariikhda ku saabsan luqaddan.
Xin waxay sheegeysaa in Nushu ay adagtahay in loo qoro sida ay tahay ama loo dhigo.
“Waxaa jira caqabado dhowr ah marka la baranayo, maadama habka loo qoro uu ka duwan yahay midka Shiinaha ee aan maanta ku hadalno, ha ahaato sida loogu hadlayo ama loo qorayo. Haddii aadan ku hadlin luqaddda looga hadlo gudaha, wey adagtahay in la akhriyo ama lagu heeso Nushu”.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54462144original article
Previous articleAlshabaab oo Canshuur 13 Milyan Dollar ah ku urursatay 9 Bilood iyo Banki caan ah oo.. (Warbixin Q/Midoobay)
Next articleRASMI: Isku Aadka Wareega Group-yada Koobka Kubada Cagta Gobolada Somaliland Oo La Shaaciyay & Waliba Sida Ay U Wada Ciyaari Doonaan